बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउनु हुन्छ ? साबधान एकपटक अबस्य पढ्नुहोस !! - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ जिबनशैली/बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउनु हुन्छ ? साबधान एकपटक अबस्य पढ्नुहोस !!
अहिलेको समयमा मोबाइल फोन हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ। हरेक समय हामी फोन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। मोबाइल सँग यति जोडिएका छौं, राति सुत्नु अघिसम्म मोबाइल स्क्रिनमै हराउने हामी बिहान उठ्नासाथै फोन मात्र देख्छौं। ब्युँझने बित्तिकै फोन चलाउने हाम्रो बानी भइसकेको छ।तर अध्ययनहरुले यसरी बिहान उठ्नासाथ मोबाइल चलाउँदा विभिन्न प्रकारका असर निम्तन सक्ने देखाएका छन्।
पछिल्लो समय बेलायतमा करीब दुई हजार व्यक्तिमा गरिएको सर्वेक्षणबाट बिहान उठे लगत्तै मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुको दिनको शुरुआत तनावबाट हुने पाइएको छ। जसका कारण उनीहरुलाई आफ्नो नियमित काम गर्न असहज हुन्छ।विज्ञहरुका अनुसार, उठ्ने बित्तिकै जब हामी मोबाइलको नोटिफिकेशन देख्छौं, मस्तिष्कले त्यही विषयमा सोच्न थाल्छ। जसको कारण हाम्रो ध्यान दोस्रो काममा जाँदैन। त्यसले हाम्रो कार्यक्षमतामा असर पुर्‍याउँछ।
बिहान उठ्नासाथ जब हामी कुनै विषयमा सोच्छौं, लगातार त्यसबारे सोच्दा हामीलाई तनाव र व्याकुलता हुन थाल्छ। बिहान कतिपय व्यक्तिको रक्तचाप बढेको अवस्थामा हुन्छ, यस्तोमा धेरै तनाव लिंदा रक्तचाप थप बढ्न सक्छ। जसका कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।बिहान मोबाइल चलाउँदा हामी सामान्यतया इमेल वा सोसल मिडियाको नोटिफिकेशनमै आँखा लगाइरहेका हुन्छौं, त्यस क्रममा हामी बितेका समयका कुरा पढिरहेका हुन्छौं।
हामी आफ्नो वर्तमान बिर्सेर अतीतमा हराउन थाल्छौं। जसले गर्दा तपाईंको दिनको शुरुआत राम्रो हुँदैन।विज्ञहरु बिहान उठे लगत्तै मोबाइल फोन नचलाउन सुझाव दिन्छन्। तपाईं दिनको शुरुआत योग वा ध्यानबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले मन र मस्तिष्कमा शान्ति र ऊर्जा भर्छ र तपाईं आफ्नो दैनिक काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्नुहुन्छ। – एजेन्सी
होसियार ! यी ६ प्रकारका खानेकुरा फेरि तताउँदा बिष हुन सक्छन् !!!
जति थोरै सुतिन्छ, उति छिटो मरिन्छ’ सचेतनाको लागि १ शेयर गरौं
प्रोटिनको कमी माछामासु भन्दा पनि यी ५ शाकाहारी खानाले गर्छ पूरा